S&P 500 ၏ခွေးများ - ခိုင်မာသောသမိုင်းဝင်ကြီးထွားမှုနှင့်အတူအမြတ်အစွန်းသည် ၄.၆၆% - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B4.66B စျေးကွက်သတင်း
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick စက်တင်ဘာလ 13, 2019 ဇန်နဝါရီလ 16, 2020 S & P 500 ၏ခွေးများ ငွေချေးစာချုပ်များ, စီးပွားရေး, Corporate Bonds, မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်, အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ, S&P 500 ၏ခွေးများ - ၂၀၂၀, အယ်ဒီတာရဲ့ Pick, Fixed ဝင်ငွေခွန်, ဝင်ငွေ Aristocrats, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ
မတည်ငြိမ်မှုနည်းသော ၀ င်ငွေကိုမည်သူထပ်မံလိုချင်မည်နည်း။
တစ်နှစ်မှသုံးရက်အထိ 20.78% ပြန်လာ
1 နှစ်အတွက်ပြန်ပို့ခြင်း% X ကိုကြည့်ရှုခြင်း
(၉-၁၁-၁၉ အထိစွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်အ ၀ ရရှိသည်)
အတိုးနှုန်းကျဆင်းမှုနှင့်အတူ Durig's Dogs of S&P 500 အစုစုရဲ့ပျမ်းမျှမြင့်မြတ်မြတ်အထွက်နှုန်း ၄.၆၆% ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်းစရာမလိုဘဲရိုးသားသည့်အထွက်နှုန်းရရန်စိတ်အားထက်သန်နေကြသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုပိုမိုဆွဲဆောင်လာကြသည်။အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအမေရိကန်ဘဏ္Treာရေးကဏ္ကိုကြည့်ပါ).
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေဖြင့်တစ်နှစ်တာကာလအတွင်းနှစ်ဆထက်ပိုပြီးနားလည်သဘောပေါက်ရန်အခွင့်အလမ်းရသောအခါအဘယ်ကြောင့်အမြတ်ငွေ ၂.၁၉% ရရှိရန်နှစ် ၃၀ ကိုလက်လှမ်းမီမှာလဲ။
များစွာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ယနေ့ခေတ်တွင်ရှယ်ယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်နေကြသော်လည်း Durig's S & P 500 အစုစု၏ခွေးများ တကယ်တော့ ဝေးလျော့နည်းသမိုင်းမတည်ငြိမ်မှုပါရှိသည် တစ် ဦး နှင့်အတူ S & P 500 သူ့ဟာသူထက် beta ကို သာ 0.71 (S & P 500 vs. ) ၏။ အဂတိလိုက်စားမှုအားဖြင့်ဒီအပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုလျှော့ချခြင်းသည် Durig ၏အစုစုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်းဖြင့်ဒီနေ့၏ရှယ်ယာစျေးကွက်ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်မြင့်မားသောကျဆင်းမှုများကိုလျှော့ချပေးသည်။
ဥပမာ - S&P 500 ဇယား Durig's Dogs ၏သမိုင်းဇယားကိုကြည့်။ S&P 500 ၏ဇယားကိုကြည့်ပါ။အောက်တွင်).
S&P 500 ၏တစ်နှစ်မှတစ်လနောက်ဆုံးဇယားကွက်
S&P 500 သည် Durig's Portfolio (အထက်) ထက် ပို၍ သိသာစွာကျဆင်းမှုကိုမည်သို့တွေ့မြင်နိုင်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ဤသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှကူညီပေးသည် အပြတ်အသတ်ကျဆင်းခြင်းမရှိဘဲအပြာရောင်ချစ်ပ်ရှယ်ယာများ၏အတက်ဘက်တွင်ပါ ၀ င်ပါ ရှယ်ယာစျေးကွက်များမကြာခဏတွေ့ကြုံခံစားသော။ အစုစုတစ်ခုလုံး၏စျေးကွက်နှင့် S&P 500 နှင့်အရည်အသွေးပိုမိုမြင့်မား။ အထွက်နှုန်းကောင်းသည့်အပြာရောင်ချစ်ပ်ကုမ္ပဏီများကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အစုရှယ်ယာစျေးကွက်များ၏အပြောင်းအလဲများကိုအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းများ၏အစုရှယ်ယာ၏အနိမ့်အမြင့်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်စပ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။
S&P 500 အစုစု၏ Durig ၏ Dogs ၏တစ်နှစ်တာ-to-date ဖြစ်အောင်ဇယား
ဘယ်သူဘယ်သူမှမလိုချင်ကြဘူး ပိုမိုဝင်ငွေ နှင့် လျော့နည်းမတည်ငြိမ်မှု?
အပြာရောင် Chip ခံနိုင်ရည်
Caliber Financial Partners ကိုတည်ထောင်သူနှင့်ဥက္ကpresident္ဌပက်ထရစ်ဟလီလီသည်၎င်းတွင်ပြောရန်ရှိသည် မကြာသေးမီဆောင်းပါး ခက်ခဲသောစျေးကွက်များ၌အကျဘက်အန္တရာယ်များကိုလျော့ချနိုင်ရန်အပြာရောင်ချစ်ပ်ခွဲဝေထုတ်လုပ်သူများ၏စွမ်းရည်အကြောင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်အရောင်းအ ၀ ယ်များ၏အားသာချက်ကိုရယူနိုင်ပြီးတန်ဖိုးများကိုစိတ်ကျေနပ်စေသည့်အခါအချို့အရောင်းအ ၀ ယ်များကို ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။ အလားအလာရှိသောအခြေအနေတွင်အမြတ်အစွန်းများထုတ်လုပ်သည့် Procter & Gamble (PG) သို့မဟုတ်ကိုကာကိုလာ (KO) အတိုးနှုန်းကျဆင်းနေတဲ့အချိန်တွေမှာတောင်သူတို့ဟာခံနိုင်ရည်ရှိပြီးကုန်သွယ်ရေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဂျီဆန်နှင့်ဂျွန်ဆင်စသောအပြာရောင်ချစ်ပ်ကုမ္ပဏီများနှင့်အတူဤအစုရှယ်ယာအမျိုးအစားများကိုပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းဖြစ်သည်JNJသို့မဟုတ်သို့မဟုတ် Walmart (WMTရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောငွေသားစီးဆင်းမှုနှင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၀ င်ငွေတိုးပွားလာခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည့်အားနည်းချက်များကိုတားဆီးပေးနိုင်သည်။ ”
သော့ကဒီကုမ္ပဏီတွေပဲ အပြာရောင်ချစ်ပ် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်စျေးကွက်မငြိမ်မသက်ဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်တည်ငြိမ်။ ၀ င်ငွေတိုးပွားလာခြင်း၊ အစုရှယ်ယာရှင်များအားအမြတ်အစွန်းမြင့်မားစွာထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်မဟာဗျူဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအစပျိုးမှုများကိုခိုင်မာစွာအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းစသည်တို့နှင့်စပ်လျဉ်း။ စျေးကွက်မငြိမ်မသက်ဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်အတိုးနှုန်းများပြောင်းလဲခြင်းများ၌ခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်းသက်သေပြခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
S&P 500, Free Market Research နှင့်အခြားအရာများဖြစ်သော Dogs မှနောက်ဆုံးသတင်းများရယူရန်အတွက်မှတ်ပုံတင်ပါ။
Durig ရဲ့ S & P 500 အစုစု၏ခွေးများ တွေ့ပြီပုံရသည် နှစ် ဦး စလုံးကမ္ဘာ၏အကောင်းဆုံး အပြာရောင်ချစ်ပ်ရှယ်ယာများမှတဆင့်; အရည်အသွေးမြင့်မြတ်များမှတဆင့်တိုးတက်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဝင်ငွေ။ ဤအကျိုးကျေးဇူးများသည်အစုရှယ်ယာများ၏အနိမ့်အမြင့်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်စပ်မှုကိုပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုစျေးကွက်မတည်ငြိမ်မှုမှကာကွယ်ရန်နှင့်စိတ်ငြိမ်သက်မှုရစေနိုင်သည်။ ဘဏ္treာရေးအထွက်နှုန်းဆက်လက်ကျဆင်းနေကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား, S & P 500 Portfolio ၏နှစ်ပတ်လည်အထွက်နှုန်း၏ Durig ရဲ့ Dogs ကို 4.66% အမေရိကန်ဘဏ္asာရေးနှစ်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုကမ်းလှမ်းသော ၂.၁၉% အထွက်နှုန်းထက်များစွာသာလွန်သည်။
အမျိုးမျိုးသောပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ၀ င်ငွေနှင့် ၀ င်ငွေကို ဦး တည်သောကောင်းမွန်သောကွဲပြားခြားနား။ မတည်ငြိမ်မှုရှိသောအစုစုကိုရှာဖွေနေသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်၊ Durig ၏ S&P 500 Portfolio ၏ခွေးများ ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်နိုင်သည်။
သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကသို့မဟုတ်ထပ်မံသိရှိလိုပါက Durig ၏ S&P 500 Portfolio ၏ခွေးများ, မခေါ်ကျေးဇူးပြုပြီး Durig Capital ကို at (971) 327-8847သို့မဟုတ် info@durig.com သို့အီးမေးလ်ပို့ပါ။
ခွငဖြေ - အတိတ်ကစွမ်းဆောင်ရည်ကအနာဂတ်အောင်မြင်မှုရဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ပါ။ ပြသထားသောမည်သည့်စွမ်းဆောင်ချက်မဆိုဤထုတ်ဝေမှုသည် ၉-၁၁-၁၉ တွင်ဖြစ်သည် * အသုံးပြုခဲ့သည့်အခြေခံစံနှုန်းမှာ S&P9TR Idx ဖြစ်သည်။ ဒီသုံးသပ်ချက်တွင် Durig Capital မှတင်ပြသောအထွက်နှုန်းမြင့်မားသောနည်းဗျူဟာများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားလုံးအတွက်မသင့်တော်ပါ။ ၎င်းသည် Durig Capital မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များမဟုတ်သကဲ့သို့လုံခြုံရေး ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းချရန်အတွက်တိကျသောထောက်ခံချက်လည်းမဟုတ်ပါ။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်သင့်တော်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်မချမီမှတ်ပုံတင်ထားသောပညာရှင်တစ် ဦး ထံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များကိုတောင်းခံသင့်သည်။
2019 abbv adm ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း သြဂုတ်လ ben အပြာရောင်ချစ်ပ်ရှယ်ယာ အပြာရောင် Chip စတော့ရှယ်ယာ အပြာရောင်ချစ်ပ် cah အများပိုင်သတင်း cvx အမျိုးမျိုး ခွဲဝေ ပိုင်းခြေဝင်ငွေခွန် ခွဲဝေမှုအထွက်နှုန်း ခွဲဝေအထွက်နှုန်း Dividends đi DJIA ခွေး အဆိုပါ DOW ၏ခွေးများ dow Dow Jones Dow Jones စက်မှုပျမ်းမျှ ရေ Durig Capital ကို ed emr ရှယ်ယာ GPC တိုးတက်မှုနှုန်း မြင့်မားသောမြတ်များအထွက်နှုန်း မြင့်မားသော Dividend အထွက်နှုန်း မြင့်မားသည် မြင့်မားသောအထွက်နှုန်း မြင့်မားအထွက်နှုန်းထိတ် ဝငျငှေ ဝင်ငွေနည်းဗျူဟာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသုတေသန ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟာဗျူဟာ kmb ko ခြေထောက် တစ်သက်တာ မိုက်ကယ် B Higgins MMM Nasdaq အဝတ်မပါသော NYSE Pep အစုစု အစုစုကိုမဟာဗျူဟာ ပြန်လာ S&P S&P 500 SP500 စတော့ရှယ်ယာ စတော့ဈေးကွက် စတော့ရှယ်ယာ t tgt လှ wba xom
ခရစ်ကက် Extravaganza 2019: USACPL & NJ ခရစ်ကက်ကောင်စီ T10 ညလိဂ်နှင့်နှစ်ပတ်လည်ချန်ပီယံဆုဖလားညဖွဲ့စည်းပါ